Enter- Short Film ( ဇာတ်လမ်းတိုရုပ်ရှင်)… – PVTV Myanmar
Enter- Short Film ( ဇာတ်လမ်းတိုရုပ်ရှင်)…
·9months ago ·33 Comments
Enter- Short Film ( ဇာတ်လမ်းတိုရုပ်ရှင်)
Like – 5.4K Share – 468
Thet Htoo Aung says:
2021-04-28 at 5:37 PM
မတရား ဖမ်းဆီးခံ ပြည်သူများ အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ပါစေ မြန်မာနိုင်ငံ စစ်အာဏာရှင် လက်အောက်မှ လွတ်မြောက်ပါစေ
2021-04-28 at 5:40 PM
Thu Ko Ko says:
2021-04-28 at 5:46 PM
အဲဒိ director ဘယ်သူလဲဆိုတာ
WaiYan Linhtet says:
2021-04-28 at 5:52 PM
ဘဝတွေ ဘဝတွေ နာကျည်းရပါတယ်ကွာ
2021-04-28 at 6:00 PM
နှစ် 70 ကျော်ကတည်းက ဒီလိုမတရားခံစားခဲ့ရတဲ့ သူတွေဘယ်နှစ်သန်းတောင် ရှိခဲ့မလဲ😢? အခုလက်ရှိလဲ ဖမ်းဆီးထားတဲ့ ကျောင်းသားပြည်သူတွေ အမြန်ဆုံးလွတ်မြှောက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်🙏
2021-04-28 at 6:21 PM
ပြည်သူများ ဘေးရန်ကင်း ပြီး ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ အမြန် ရပါစေ..ဖမ်းဆီ ထား သော နိုင်ငံ ဆောင်များ နဲ့ ပြည်သူ အပေါင်း အမြန်လွတ် ပါ စေ..ကျဆုံးသွား သော သူရဲကောင်းများ အာဇာနည် များ
ဂုရု ကြီး များ နဲ့ နတ်ဘုရားများ စောက်ရှောက် ပါစေ
ကောင်းရာသုဂတိ ရောက် ပါစေ.
ကျန်ရစ်သူမိသားစု များ ​ဘေးရန်ကင်း.ပြီး စောက်ရှောက် သူများ ရှိ ပါစေ
လက်နက်ကိုင် တပ် များ အား လုံး ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
အရေးတော် ပုံ အောင် ကို အောင်ရမယ်.
Moethan Dar says:
2021-04-28 at 6:25 PM
ရင်နာစွာဖြင့် မျက်ရည်ကြားမှ ကြည့်မိသည် 😭
Thi Dar says:
2021-04-28 at 6:28 PM
Dawkhinmar Thein says:
2021-04-28 at 7:01 PM
Cherrysoe Cherrysoe says:
2021-04-28 at 7:12 PM
Nyo Chaw says:
2021-04-28 at 7:14 PM
ကလေးတွေကို တွေးကြည့်ရင် စိတ်ထဲအလိုလိုဝမ်းနည်းပြီးမျက်ရည်ကျမိတာ
Nyo Nyo says:
2021-04-28 at 7:21 PM
Mar Mar Win says:
2021-04-28 at 7:39 PM
2021-04-28 at 7:44 PM
Salai Kyaw Htet Aung says:
2021-04-28 at 8:03 PM
Good entertainment. Go ahead 👏👏👏👏
Pyone Pyone says:
2021-04-28 at 8:16 PM
မတရားအချုပ်အနှောင်ခံရသူများ အားလုံး အမြန်လွတ်မြောက်ကြပါစေ
Khin Wine Ye says:
2021-04-28 at 8:45 PM
2021-04-28 at 8:50 PM
ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားအားလုံး မတရားနှိပ်စက်ချင်းအန္တရာယ်မှ ကင်းဝေးကြပါစေ🙏🙏🙏
Ei Ei Khaing says:
2021-04-28 at 9:26 PM
အစမှာပဲ ငိုမိတယ်။ တွေးလိုက်တာနဲ့မျက်ရည်ကျတယ်။ ခံစားရတာတွေ ရင်ထဲမဆံ့ဘူး။
2021-04-28 at 9:39 PM
Nwe Ni Phyo says:
2021-04-28 at 9:42 PM
ဇာတ်လမ်းလေး ကြည့်ပြီး စိတ်ထဲမကောင်းဖြစ်မိတယ် ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သူတွေ ဘယ်လိုတောင် နေရရှာမလဲ ဒီတိုက်ပွဲ နိုင်ကိုနိုင်မှ ဖြစ်မှာ
Mg Ko Thu says:
အဓမ္မတရားကြီးစိုးနေသောအခါ ဓမ္မဘက်တော်သားတွေ မတရားခံရသည်
Yu Za Ni says:
2021-04-28 at 10:16 PM
2021-04-28 at 11:34 PM
ရက်စက်ယုတ်မာသော စစ်မိစ္ဆာများ ကြောင့် ကြွေလွင့်ခဲ့ရသော သူရဲကောင်း ပြည်သူများအားလုံးကို ဦးညွှတ် လျက်
2021-04-29 at 12:54 AM
2021-04-29 at 3:51 AM
2021-04-29 at 7:44 AM
Nway Oo Maw Maw says:
2021-04-29 at 9:59 AM
ยาว ยาว อุ says:
2021-04-29 at 5:31 PM
Zaw Wom Aung says:
2021-04-30 at 10:17 AM
Zaw Min Zaw says:
2021-04-30 at 2:20 PM
ကျွန်တော်တို့အဖြစ်က ဘာနဲ့တူနေလဲဆိုတော့ ရေနစ်တဲ့လူကို ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ဖို့အတွက် အထူး…